निर्मला हत्या प्रकरण: बयानमा कसले के-के भने ?
गृह मन्त्रालयले कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जसमा बिभिन्न पक्षको बयान सहितको ३७ पेजको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
सार्वजनिक प्रतिवेदनको एक अंश, जसमा स्थानीय र पिडितहरुको बयान लिईएको छ ।
मिति २०७५/४/११ गते महाकाली अंचल अस्पतालका डा. हरीकुमार श्रेष्ठ सहित ३ जनाको टोलीले शव पोष्टमार्टम गरेको । उक्त पोष्मार्टमको प्राप्त रिपोर्टमा निर्मला पन्तको मृत्युको कारण (Cause of Death) मा ̎ Throttling Leading to Asphyxia˝ उल्लेख रहेको छ । साथै घांटी थिची हत्या गरेको गरेको र घाँटीको Verticle midline fracture of Thyroid cartilege (घाँटीको अगाडीपटीको किलकिले हड्डी भाच्चिएको, मृतक निर्मलाको यौनाङ्गको हाइमेन Fresh Tear भएको र त्यसको अवस्था at2O, clock र 7, o Clock 1-1 cm उल्लेख गरिएको छ । मृतकको यौनाङ्गको स्वाब लिंदा यौनाङ्गमा ब्रिय नदेखिएको तर कन्फर्मको लागि प्रयोगशालामा पठाउनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
बुझिएको पिडित पक्ष तथा स्थानीय व्यक्तिहरुको संक्षिप्त भनाई
यज्ञराज पन्त (निर्मलाका बाबु) -
छोरी हराएको दिन हामी भारत गएका थियौं खबर भएपछि १२ गते फर्केका हौँ । मलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर एकजना मान्छे पक्राउ परेका छन् उनले लगाएका कपडाका टुक्रा र कन्डमको खोल बरामद भएको छ त्यो मान्छेको बारेमा किटानी जाहेरी दिन पटक-पटक दवाब दिईयो । तर मैले त्यो व्यक्ति (दिलिप सिङ बिष्ट) ले यो घटना गराएको भन्ने हामीलाई विश्वास छैन भन्दै जाहेरी दिइन । उनीहरु (प्रहरी) लर बाबुले छोरीलाई बलात्कार गरी मारेको घटना पनि छन् भन्दै घुमाउरो किसिमले धम्कि पनि दिए । शव उठाउन पनि मलाई धेरै दवाव दिइयो, भागि भागि हिडेको हुँ ।
दुर्गादेवी पत्न (निर्मलाकि आमा)
साथीको घरमा गएको छोरी अवेरसम्म नफर्केपछि म अन्दाजी बेलुका ६ बजेतिर रोशनी वमको घरमा सोधपुछ गरेको हुँ । दिउसो २ बजेतिर नै अम्बा समेत लिएर फर्केको जानकारी दिइन त्यसपछि म फर्के । फेरी साँझ ७ बजेतिर छिमेकी लक्षमणको साथमा रोशनीको घरमा पुगेर सडकबाटनै उनीहरुलाई बोलाएको हुँ । मेरी छोरी तिमीहरुकै घरबाट हराएको छ केहि भएमा तिमीहरुनै जिम्मेवार हुनेछौं भनेर कुरा गर्दा रोशनीको दिदि बबिता बमले घरको व्रंदाबाट 'तिम्री छोरी कहाँ गई हामीलाई के थाहा ? पोइला पो गइन कि, हामी जिम्मेवार हुन्छौ ?' भन्ने कुराहरु गरेकी हुन् । त्यसपछि हामी अन्दाजी राति ९ बजे आस्थायी प्रहरी पोष्ट सालघारीमा पुगेर खवर गर्यौं, भोली खोजौला भन्ने जवाफ दिए । वडा प्रहरी कार्यालयमा पनि फोन गरेर खोज तलासको लागि अग्राह गर्यौं तर कहीबाट पनि सुनुवाई भएन ।
रविन्द्र तिवारी (वडा सदस्य, भीमदत्त नपा)
नावालिका हराएकै दिनको राती अवेरसम्म खोजतलासका लागिहामीले प्रहरीलाई धेरै पटक हारगुहार गर्यौं तर सुनुवाई भएन । मोबाइल नम्बर ९८४८१४०२५५ बाट कहाँ-कहाँ फोन गरियो चेक गर्दा हुन्छ ।
साधुराम चौधरी (निर्मला पन्तको साइकल खोलाबाट निकाल्ने व्यक्ति, प्र. नि जगदिस भट्टको भतिजा लोकेन्द्र भट्टको घरमा बस्ने गोपाल):
म साउन ११ गते बिहान अन्दाजी १० बजेतिर सौच गरेर फर्कंदा खोला किनारमा साइकल देखें । उक्त साइकल मैले निकालेर सडकमा राखेको हुँ । मैले देख्दा साईकलको ह्यान्डल तल र चक्का माथि परेको अवस्था थियो । निज साधुराम चौधरीले साइकल भेटेको बिषयमा बारम्बार कुरा बदल्दै कहिले साइकलको सिट माथि फर्केको भन्ने त कहिले तल फर्केको थियो भन्दै निजले बस्ने घरतिर साइकल नलगी बिपरित दिशातर्फ साइकल लागेर राखेको भन्ने भनाइ समेत शंकास्पद देखिएको छ ।)
धना र जमुना भण्डारी (शरुमा साइकल देख्ने महिला):
हामी २ बहिनी वाख्राका लागि स्याउला काट्नगएका थियौ । साथमा यो फुच्चे पनि थियो (सानो छोरालाइ देखाउदै) । यसले खोलामा साइकल देखेछ र हामीलाइ " ममी साइकल साइकल” भने तर हामीले खासै वास्ता गरेनौ । पछी हेर्दा (धना भण्डारी) साइकल देखियो तर धेरै भाग डुवेको अवस्थामा थियो । तर कापी तथा अम्वा भने देखिएन । पानी परेकोले खोला तर्न सक्ने अवस्था थिएन ।
मोति बहादुर नेपाल (नेपाली सेनाका भपू, स्थानीय ) :
मिति २०७५।४।११ गते बिहान मृतकको आमा लगायत अन्य व्यक्तिहरुसंगै भएको वेला मैले रोशनी भन्ने आचल बमको घरमा गइ रोशनीलाइ ̎नानी एकपटक तल अउन, तिम्रो साथी हराउदा तिमीलाई माया लागेन ॽ ̎ भनी सोधपछु गर्दा निजको दिदि भन्ने अनिता बमले 'तँ को होस हामीलाई सोधपछु गर्ने ॽ भनी झपारेकोमा मैले यहाँ तल अइज चुल्ठो समातेर घमुाएपछी थाहा पाउछेस भनेको हुँ ।
दिलिप सिङ विष्ट (अभियुक्तको रुपमा हिरासतमा लिईएका व्यक्ति, हाल हिरासत मुक्त) :
म केही अघिमात्र जेलवाट छुटेको हुँ दैनिक रुपमा जेलमा जाने, वसपार्कतिर काम गर्च्झ्हू, थोरै पैसा कमाउछु खान्छु, कहिले काही साथी भाईसँग १०/२० रुपैया माग्ने गर्छु । वाटोमा हिड्दै गर्दा मान्छेको भीड देखें के भएछ भनेर सोधपछु गर्दा पन्तको छोरीको हत्या भएको हो रे भन्नेसम्म सुनेको हुं । म आफ्नै वाटो लागे, मलाइ पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर पानीपट्टि लगाएर चरम यातना दिए र यो घटना मैले नै गराएको हो भन्न वाध्य पारियो । यो घटनामा मेरो कुनै संलग्नता छैन, म निर्दोष छु ।
दिलिप सिङ विष्टकि भतिजी बुहारी:
म बिवाह गरेर यो झपुडी (घर)मा अएको पनि थुप्रै बर्ष भयो । कहिलेकाही एक्लै वस्छु तर आजसम्म उहां (दिलिप सिङ विष्ट)वाट म प्रति कुनै नराम्रो व्यवहार भएन ।
हामीले कुनैपनि वस्तु माग्दा कहिले पनि हातमा थाप्नु भएन, अन्यत्रै राखि दिनु पर्दथ्यो । म उहां दिउसोतिर निस्कने र साँझ ७/८ बजे फर्कनुहुन्थ्यो । उहाँले गांजा-भाङ खानुहुन्छ । यो घटना उहांले गराएको हुनै सक्दैन । फसाउन खोजिएको हो ।
टेकराज जोशी (नाइके, कन्चनपुर कारागार):
दिलिप सिङ विष्टसाढे ९ बजेसम्म यही जेलमा संगै वसेका हौं । उनलाइ हामीसंग चिन्दछौ, अनीवानी राम्रै थाहा छ । यो निर्मला पन्तको हत्यामा उनको संलग्नता हुनै सक्दैन । उनले यो काम गरे भन्नेमा हामीलाई २०० प्रतिशत विश्वास छैन । गंभीर षडयन्त्र भएको छ ।
रुपा कार्की (क्वीन व्यटुी पार्लर संचालक) :
निर्मला पन्त हराएको भन्ने चर्चामा आएपछि साउन ११ गते मेरो श्रीमान पनि त्यतै जानुभएको थियो । मलाइ पसलमा अउन ढिला भएकोले श्रीमानलाइ फोन गरे उहाँले साईकल भेटेको कुरा गर्नुभयो । मैले साइकल भेटिएको कुरा गरें, त्यसपछी मेरो नजीकै रहेकी अन्जना वमले “लौ दिज्यु साइकल भेटिएछ, अब त्यतैतिर शव पनि भेटिएला” भन्ने कुरा गरेकी हुन् । उनले यो कुरा किन भनिन् त्यो चाहि म भन्न सक्दिन तर भनेकै हुन् ।
चक्र वडू (हिरासतबाट छुटेका, हाल सार्वजनिक मुद्दा) :
यो केसमा मेरो संलग्नता हुन सक्ने दखेर प्रहरीले हिरासतमा लिएको हो । मेरो मोवाइलमा रहेको फोटोहरु हेरियो । सोधपछु गरे । त्यस क्रममा मलाइ रातीको समयमा अत्याधिक सारीरिक यातना दिए, डर त्रास देखाए । अभियोग स्वीकार्नु ५० प्रतिशत सजाय कम गराईदिन्छौं भन्ने प्रलोभन पनि देखाएका हुन् । म भारतमा काम गर्न गएको मान्छे हुं । यस घटनामा म निर्दोष छु, म माथि प्रहरी ज्यादती भयो ।
दिपेन्द्र मडै (दिलिप सिङ विष्टका छिमेकी) :
प्रहरीले २६ दिन पछी विष्टको कपडाको टुक्रा र कन्डमको खोल फेला परेको भनिएको छ । त्यो सम्भव छैन, घरैवाट कपडा च्यातेर लगेका छन्। यस सम्वन्धमा मेरा मामा नाता पर्नेले प्रहरीले कपडाको टुक्रा च्यातेर लगेको देखेका हुन् ।
किरणराज विष्ट (प्रहरी उपरीक्षक दिल्लीराज विष्टका छोरा) :
मेरो नाम किरण राज विष्ट, पहाड घर दार्चुला हाल भीमदत्त न.पा. १८ गोबरिया बस्दछु । पेशा फोटोग्राफर हो । मोबाइल नं. ९८४८७४२८७५, ९८१२७७६४२६, ९८६५९०३८६८ हो । मैले १२ कक्क्षासम्म पढेको छु ।
२०७५।४।१० गते म आफ्नै घरमा थिएँ । मेरो फेसबकु अइ.डी. kiranbista , wisekiran , kiranbista01instagram हो । मेरो नागरिकता अनुसुार जन्ममिति २०५६ बैशाख १० गते हो ।
म बायाँ हातले लेख्ने गर्छु । २०७५।४।१० गते अन्दाजी २ बजेपछी होटेल ओपेराको फेमेली रेष्टुरेन्टमा ऐश्वर्या विष्ट, साथी शिशिर र उनीहरुसंग अएका तर मैले नचिनेका तीनजना केटीहरु पनि थिए । म २०७५ श्रावण २६ बुद्ध एयरलान्सको फ्लाइटवाट काठमाडौं गएको हुँ। म निर्मला पन्तलाई चिन्दिन ।
मिति २०७५।४।१० गते साँझ साथी साजन बुढा ऐर र म मेरो घरमा बसेका थियौं । म मिति २०७५।४।११ गते दोधरा चाँदनी जोडने झोलुंगे पुलमा गएको र अन्दाजी ४ बजेतिर घर फर्केंको थिएँ । २०७५।४।१२ गते म कहाँ गएँ भन्ने थाहा छैन । मैले नासा इन्टरनेसनल कलेज तिनकुनेमा कक्षा ११ र १२ पढेको हुँ। आयुष विष्ट (नगरप्रमखु सुरेन्द्र विष्टका भतिजा, बर्ष २१): रोशनी वम र वविता वमलाई म चिन्दिन ।
आयुष विष्ट (नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टका भतिजा, बर्ष २१) :
मेरो मोबाइल नं. ९८०६४६८१०१ र ९८४००७०६८४ हो । मेरो बाबकुो नाम भुपेन्द्र विष्ट हो र घर भीमदत्त .न.पा ४ । मिति २०७५।४।१० गते म आफ्नै घरमा थिएँ तर कति बजेसम्म घरमा थिएँ भन्न सक्दिन । तर साउन ९, १० गतेतिर म साथीहरुसंग एयरपोर्टतिर फुटवल खेल्न गएको थिएँ । म ब्रिक्सटन कलेज महेन्द्रनगरमा बिबिए लास्ट सेमेस्टरमा अध्ययन गर्दछु । नियमित कलेज जाने गरेको छैन । म रोशनी वम र वविता वम तथा किरण राज विष्टलाई चिन्दिन । मैले निर्मला हत्या बारे २०७५।०४।११ गते बेलकुी ५/६ बजे तिर मुन साइन क्याफे महेन्द्रनगरमा साथी निरज नेगीबाट थाहा पाएको हुँ । म कहिलेकाही अल्कोहल ड्रिंक गर्छु ।
वविता भन्ने अनिता वाम (बर्ष २१/२३) :
साउन १० गते सांझ म ट्यशुन पढेर घर फर्केको थिएँ । ७ वजे तिर निर्मलाको आमा आएर गेटवाट चिच्याउदै गाली गर्न थाल्नुभयो । निर्मलालाई केही भए तिमीहरु जिम्मेवार हुन पर्दछ भनेपछी मैले जतिम्री छोरी कहां गइ हामीलाइ के थाहा ? पोइला पो गइन कि, हामी कसरी जीम्मेवार हुन्छौ ” भनेकी हुं । यी कुराहरु मैले आवेशमा अएर भनेकी हुं । एस.पी. (दिलिपराज विष्ट) लाइ म चिन्दिन, यही आएर देखेकी हुँ । उहाँको घर पनि दार्चुलामा नै रहेछ । यो घटनामा मेरो कुनै दोष छैन ।
रोशनी भन्ने आचल वम (मृतककी साथी, बर्ष १४) :
साउन ९ गते म निर्मलाको घरमा गएर चटपटे खाएं । निर्मलासंग १० गते मेरो घरमा संगै वसेर होमवर्क गर्ने सल्लाह भयो । ११ गते अन्दाजी ११.०० वजेतिर निर्मला साइकल चढेर हाम्रो घरमा आइन । संगै वसेर केही वेर होमवर्क गर्यौं, उनीले केही वेर टिभी पनि हेरिन् । अन्दाजी २ वजेतिर केही अम्वा लिएर फर्किन । अघिल्लो दिन खाएको चटपटेको दिनुपर्ने रु. २० पनि दिएर पठाएको हुँ, यस्तै ५ वजेतिर निर्मलाकी आमा आएर सोध्नुभयो मैले उनी अघि नै घर फर्केको कुरा वताएपछी उहाँ फर्कनुभयो, फेरी ७ वजेतिर पनि आएर बाहिरवाटै गाली गरेर फर्कनु भएको हो ।
दिपेन्द्र बहादुर बम (शिक्षक) र इन्द्रादेवी बम (वडा सचिव) वविता र आचल अचल वमकी वावुआमा:
हाम्रो मोबाइल नं. ९८६८७३५२३५ र ९७४९५२०११२ हो । यो घटना हुँदा हामी दुवैजना दार्चुला थियौं । छोरीले फोन गरेर निर्मलाकी आमाले यसो भनीन भन्नेकुरा गरेकी थिईन् । घटनावारे थाहा भएपछी हामी आएका हौ । हाम्री छोरीहरु दोषी छन् भने कारवाही हुनुपर्छ । छ्मेकीले पनि वोली दिनुपर्यो । हामी यहां वस्नै नसक्ने भएका छौ, बेइज्जत भएको छ । घर तोडफोड भएको छ । मेरो अम्बाको रुख मैले लगाएको हो । अम्वाको रुखमा आसपासका केटाहरु चढेर खाने होहल्ला गर्ने, छोरीहरुले खासै अम्वा नरुचाउने भएकाले पनि मैले नै साउन १७ गते काटेको हुँ ।
विद्या पन्त (अनिता बमको साथी, ओम प्रकाश पन्तको छोरी एवं अकाश जोशीको श्रीमती, भीमदत्त नपा, उल्टाखाम वस्ने):
मलाइ मिति २०७५।४।१० गते निज अनिता बम ट्यसून पढ्न आएको एकिन छैन । सो विषयमा प्रहरीले मेरो कापी माग गरी फोटोकपी समेत गरेर लगेका छन् । तर सोही विषयमा निज अनिता बमलाई सोधनी गर्दा उक्त दिन ट्यसून पढ्दा म विद्या पन्तसंगै बसेको थिएँ भन्ने जवाफ दिएका । (०९१५२६९३४ बाट निज विद्या पन्तको मोबाइल नं. ९८०९४३५५५३ मा फोन गरेर सोधीएको)
बाबुराम रावत (अनिता बम ट्यसुन पढ्ने Mirai Education VIsa Center का संचालक ) :
मिति २०७५।४।१० गतेका दिन अनिता बम ट्यशून पढ्न आए/नआएको एकिन भएन । सो सम्बन्धमा अनिता बम र अनिता बमको बुवा स्वयंम आएर मिति २०७५।४।१० गतेका दिन ट्यशून पढ्न आएको भनी भनिदिनुपर्यो भनेर गएका थिए तर उनी आएनआएको भन्न नसक्ने भनि सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा मैले जवाफ दिएक हौ ।